Wallabag: Open iyi onwe-Bochum ngwa ịzọpụta weebụsaịtị | Site na Linux
Taa, anyị ga-ekwu maka a emeghe ngwa nke na-egbochi anyị iji ọgụgụ ngwa nwe, mmechi na azụmahịa, ma ọ bụ n'efu na freemium, dị ka Instapaper, Pocket, Memex and Polar. Ma nke a bụ Wallabag, otu onwe-Bochum ngwa PHP.
N'ihi ya, Wallabag bụ ngwa anyị nwere ike iwunye na nke anyị ma ọ bụ nke onye ọzọ, nke ahụ na-enyekwa anyị ọrụ yiri ngwa ndị ahụ e kwuru na mbụ, n'ụzọ ọ ga-enye onye nchịkwa ya ohere ijikwa ijide ederede nke ibe weebụ achọrọ, maka ịgụ akwụkwọ mgbe e mesịrị, n'ụzọ ahaziri na nke nụchara anụcha.
Ọ bụghị nke mbụ anyị na-ekwu banyere ya Wallabag na Blog. Oge izizi karịrị 4 afọ gara aga, na ọkwa anyị gara aga akpọ "Ingwụnye Wallabag na VPS", nke anyị na-akpọ gị òkù ịtụle mgbe ị gwụchara nke a.
Wụnye Wallabag na VPS
1 Wallabag: Ngwa PHP nke onwe gị
1.1 Atụmatụ Ugbu a
Wallabag: Ngwa PHP nke onwe gị
Dị ka gị gọọmentị saịtị na GitHub , a kọwara ya dị ka:
"Ngwa nnabata onwe iji chekwaa ibe weebụ: Chekwaa ma debe isiokwu. Gụọ ha mgbe e mesịrị. Na nnwere onwe niile".
Mgbe, na ya nwere saịtị ọrụ Ọ kọwara dị ka:
"Ngwa ị nwere ike iji na kọmputa gị, ekele ya web interface. Ma ị nwekwara ike iburu ma jiri Wallabag ebe niile. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịchekwa otu isiokwu na laptọọpụ gị na-arụ ọrụ, malite ịgụ ya na ekwentị gị na ụzọ ụgbọ oloko, ma gụchaa ya na laptọọpụ gị n'ihe ndina.".
Na nke ya website na gam akporo Ọ kọwara dị ka:
"A-agụ akwụkwọ na-agụ. Nke ahụ adịghị ka ọrụ ndị ọzọ, ọ bụ n'efu ma mepee ya. Emere ya ka ị nwee ike ịgụ ma debe isiokwu gị nke ọma. Younwere ike ibudata na wallabag.org ma soro ntuziaka ịwụnye ya na sava gị, ma ọ bụ ị nwere ike ịdebanye aha ozugbo na wallabag.it. Ngwa android a na-enye gị ohere ịgụ ma jikwaa isiokwu gị ma mekọrịta ha na akpaghị aka na sava wallabag".
Wallabag Emeela ya ka ọ dị ọhụrụ ugboro ugboro kemgbe ọ malitere ya, yabụ ugbu a ọmarịcha atụmatụ ya bụ:
Na-enye ọgụgụ isi dị mma: N'ihi na ọ extracts ọdịnaya nke isiokwu, naanị ọdịnaya, na-egosiputa ya na a adaba echiche format.
Na-enye ohere ịkwaga ọdịnaya akwadoro na ọrụ ndị ọzọ: Dị ka akpa, Readability, Instapaper, ma ọ bụ Pinboard.
Na-enye API dị irè ma dị mfe: Ya mere ndị mmepe nwere ike ijikọ ngwa nke aka ha na Wallabag arụnyere.
Na-akwado ọtụtụ ndị na-agụ RSS / ndepụta aggregators: Otu n'ime nke anyị nwere ike ikwu: Miniflux, Vienna RSS, FreshRSS, Tiny Tiny RSS, Leed, Feed Reader and Fiery Feeds.
Ma ọ bara uru ịkọ nke ahụ Wallabag, ọ bụkwa ngwa na-akwado site na Yunohost, nke enwere ike ikwenye na ihe ndị a njikọ. Ọ bụrụ na ị maghị Yunohost, anyị na-akpọ gị òkù na njedebe nke akwụkwọ a ka ị gụọ akwụkwọ yiri ya gbasara ya. N'ikpeazụ, n'ime wallabag.it na-enye ha ihe, nke nwere ike ịbụ enwere ikpe n'efu maka ụbọchị 14 n’enweghi mmachi.
Ntinye ya dị mfe, yana ya akwụkwọ Ọ dị mma ma dịkwa mfe nghọta, ọ bụ ezie na ugbu a, a sụgharịghị ya na Spanish, naanị Bekee, French, German na Italiantalian. Iji mejuputa nwụnye, soro usoro ndị dị mfe akọwapụtara na ndị a njikọ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ngwa PHP nke onwe gị na-akpọ «Wallabag», nke ọtụtụ ndị na-ahụta ka otu n'ime nhọrọ kacha mma ịmeghe oghere n'akpa uwe, ebe ọ bụ na, ọ na-enye ohere ịchekwa ọgụgụ ma ọ bụ edemede ọ bụla na sava nke anyị na-enye anyị ike ịchịkwa ọdịnaya ahụ; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Wallabag: Open iyi onwe-Bochum ngwa ịzọpụta weebụsaịtị
Google amaliteworị na mmalite nke IETF QUIC na HTTP / 3 na Chrome